ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်ကျော်လျှပ်စစ် - EPONT
သင်အဘို့အညာဘက်အရပျ၌ပါပဲ ဟိုက်ဒရောလစ်ဂျက်ကျော်လျှပ်စစ်.ယခုအချိန်တွင်သင်ရှာဖွေထားပြီးမည်သည့်အရာကိုမဆိုသင်တွေ့ရှိရန်သေချာသည် EPONT.ကျနော်တို့ကဒီမှာပေါ်မှာကြောင်းအာမခံပါသည် EPONT.
မစင်စက်သည်အင်ဂျင်နီယာဂရမ် 3t, ကြမ်းခင်းဂျက် 3T, Return Transmission Jack သည်သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းအားအတွက်အထူးပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သံမဏိ။ဤထုတ်ကုန်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ် QC အဖွဲ့နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောတတိယပါတီများ၏စမ်းသပ်မှုများကိုခံစားခဲ့ရသည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထုတ်ကုန် hypoallergenic ဖြစ်ပြီးအရေပြားကိုနူးညံ့စေပြီးအရေပြားကိုနူးညံ့စေသည်။
မစင်စက်သည်အင်ဂျင်နီယာဂရမ် 3t, ကြမ်းခင်းဂျက် 3T, Return Transmission Jack သည်သုတေသန, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းအားအတွက်အထူးပြုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။1. ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရည်အချင်းများရှိသည် - ကျွန်ုပ်တို့တွင်တရားဝင်အရည်အချင်းရှိသောလက်မှတ်ရှိသည်2. ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ - စဉ်ဆက်မပြတ်သုတေသနနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု3. ဖောက်သည်စိတ်ကျေနပ်မှု - ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောထုတ်ကုန်ကိုပေးပါ